यूएईमा चार युवतीले रुँदै भने – साहुले लुगा फेरेको बेलाको भिडियो खिचिदियो – PathivaraOnline
Home > प्रवास > यूएईमा चार युवतीले रुँदै भने – साहुले लुगा फेरेको बेलाको भिडियो खिचिदियो
यूएईमा चार युवतीले रुँदै भने – साहुले लुगा फेरेको बेलाको भिडियो खिचिदियो
admin February 20, 2021 प्रवास	0
काठमाडौं। मोहमद भन्ने कम्पनीका मालिकले आजसम्म उनीहरुलाई कोठामा थु’नेर राखेका छन्। जुन कोठामा राखेका छन्, त्यस कोठामा सीसी क्यामरा जोडिएको छ। उनीहरु बस्ने, खाने, सुत्ने, लुगा फेर्ने सबै काम त्यही एउटा कोठामा गर्नु पर्ने भएकाले सबै कुरा त्यो साहुले सीसी क्यामरामा हेर्ने रहेछ। उनीहरुले लुगा फेरेको भिडियो एक दिन पीडित युवतीले देखेपछि त्यससम्बन्धमा कुरा गर्दा सिधै तिमीहरुको शरीर हेर्नलाई खिचेको हो भन्ने साहुले जवाफ दियो।
यूएईमा महिनौंदेखि चार नेपाली युवतीलाई साहुले थु’नेर या’तना दिएको समाचार डिसी नेपालमा छापिएको थियो। चार दिनअघि छापिएको उक्त समाचार थाहा पाएर पनि म्यानपावर कम्पनी भने उद्धार गर्नुको साट्टो चुप लागेर बसेको छ। अझै ती युवतीहरुको उद्धार भएको छैन। यसै विषयलाई लिएर वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालसँग बुझ्न जाँदा भर्खरै मात्र ती युवतीहरुको रोदन सुनेर अँध्यारो मुख लगाउँदै टाउकोमा हात राखेर बसेका रहेछन्।
उद्धारको काम कहिले हुन्छ भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा उनले यसरी बिचल्लीमा पारी नेपाली चेलीहरुलाई दुख दिने म्यानपावर कम्पनीका मालिकलाई तत्काल उद्धार गर्न भनेको उनले जानकारी दिए। पीडित युवतीहरुलाई रिदम ओभरसिज प्रालिले यूएईको मोहमद भन्ने कम्पनीमा काम गर्न पठाएको रहेछ। कोरोनाभन्दा अगाडि रिदम म्यानपावरले पाँच जना युवती पठाएकोमा एक जना युवती भने भागेर नेपाल आउन सफल भएकी छन्। चार जना भने अझै रुदैँ उद्धार गरिदिनु भनिराखेका छन्।
यति कम उमेरमै दे’ह’त्यागको बाटो रोजेकि अभिनेत्री जिया खानको मृ’त्युको र’हस्य किन अझै खुल्न सकेन ?
०७७ साल फागुन ९ गते आइतबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्यफल यस्तो छ…
नेपालबाट खुशी हुँदै जहाज चढेका याम मलेसियामा नै अस्ताए
मलेसियामा नेपाली चेली भनिएकाे यस्तो छाडा भिडियो यूट्यूवमा, यस्तो छ चर्तिकला! भिडियो हेर्नुस्
अष्ट्रेलियामा ८ नेपाली विद्यार्थी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित